Tag: ogologo vidiyo | Martech Zone
Tag: Ogologo vidiyo
Ọ bụghị ọnụọgụ na-eju anya, mana ọ ka dị ịtụnanya - ihe karịrị ọkara ahịa ụlọ ahịa niile na-emetụta dijitalụ n'afọ gara aga na akwụkwọ ozi ha kachasị ọhụrụ na ịre ahịa azụmahịa gị n'ọtụtụ ebe. MDG nyochara ma chọpụta ụzọ ahịa ahịa dijitalụ dị mkpa dị mkpa nke azụmahịa ọ bụla nwere ọtụtụ ọnọdụ ga-esi gbasaa nke gụnyere usoro ọchụchọ, ikpo okwu, ọdịnaya na usoro ngwaọrụ. Chọọ: Kwalite maka "Mepee Ugbu a" na Ọnọdụ - Ndị ahịa na - agbanwe site n'ịchọ ihe ndị ga - eme n'ọdịnihu dị ka
Ihe karịrị afọ 10 gara aga, edere m na nlebara anya na-arịwanye elu. Ka anyị na ndị ahịa rụkọrọ ọrụ ọtụtụ afọ, aga n'ihu igosipụta nke a n'agbanyeghị akụkọ ifo na ndị na-agụ akwụkwọ, ndị na-ekiri, na ndị na-ege ntị agaghị anọgidesi ike. Ndị na-ahụ maka ndụmọdụ na-aga n'ihu na-ekwu na oge elebara anya belatara, m na-akpọ bollox. Ihe gbanwere bụ nhọrọ - na-enye anyị ohere iji ọsọ gafee ọsọ na-adịghị mkpa, ogo adịghị mma, ma ọ bụ ọdịnaya anaghị etinye aka iji chọta nnukwu ọdịnaya. Mgbe mbụ m malitere